MIYUU KHATAR U YAHAY BINI-AADANKA: CUDURRADA IYO XASAASIYADAHA XASAASIGA AH U DULQAADANAYO DULIN - GURI, GURI
Ma aha oo kaliya waxyeello u ah xoolaha! Miyuu khatar u yahay bani-aadamka? Waa maxay cudurada ay ku dhacaan?
Sababtoo ah, waxaa had iyo jeer loo maleynayaa in boodada halis ku ah xoolaha, sababtoo ah iyagu waa sayidooda.
Ninka, dhibaatadu waxay ahayd injir. Dhab ahaan, wax walboo sidaas ma aha. Diidmadu maaha kuwo halis u ah bani-aadamka.
Meeshu jirto xayawaan, waxaa jira boodada. Waxyaabo kale ayaa ah inta milkiilayaashooda ay ka warqabaan arrintaan waxayna si firfircoon ula dagaalayaan sharkan.
Xagee ku yaallaa duleedyada guriga?
Xayawaanka aad jeceshahay ayaa keena. - bisadaha iyo eyda. In digaagga digaagga ee guryaha gaarka loo leeyahay, sidoo kale, waa degan - digaag digaag ah waa mid aan khatar ahayn eeyga ama bisad.
Koofiyadu marar badan ayay isku dhajiyaan oo waxay keenaan jiiraan guriga dhexdiisa, mid ka mid ah markasta oo sababay mora cabsi badan oo Yurubta dhexe ah cudurka bubonic. Run ahaan, doorashadooda dhiigga waxay leeyihiin. Cunug yar oo aan bisleynin ah ayaa ku duuganaya eyga iyo kan kale. Chicken - sidoo kale jecel yahay milkiilaha dhab ah.
Oo sidaas darteed, xayawaanka ku nool aqalka ama gurigaba, waxay isku jiidayaan dulin-nuucyada kuwaas oo si deg-deg ah u dhasha oo u faafi maayaan xoolaha oo kaliya. Ukunta iyo dirxiga waxay ku dhacaan dildilaaca, roogag iyo alaab guri, iyo gaar ahaan badan oo iyaga ka mid ah eyga ama qashinka.
Guryaha magaalooyinka, waxay ku dhici karaan guryaha laga soo bilaabo dhulka hoose, albaabka ama laga bilaabo deriska kuwaas oo xajiya xayawaanka.
Maadaama boodada ay diyaar u yihiin inay quutaan dhiig kasta, oo ay ku jiraan dhiig bini'aadan, waxay badanaa kufsadaan dadka. Gaar ahaan waxay tagaan carruurta yaryar.
Aad u badan waxaa muhiim ah in la bilaabo bilawga ah in la dagaalamo dulinyadamarka aysan qaadan lacag badan iyo dhibaatooyinka caafimaad ee reerka ka bilaabaan.
Miyuu khatar u yahay bani-aadamka?
Si aan u bilowno, waxaan qeexaynaa nooca "bahal". Xaqiiqooyinka ayaa tilmaamaya ectoparasites, taas oo ah, dulin ku nool noolaha jidhkooda. Waxay noqon karaan xayawaan kasta, shimbir, iyo sidoo kale nin. Waa cayayaanka dhiigga nuugaya, marka, marka cuntada la gaarsiiyo, xoqdo maqaarka. Iyada oo candhuuf ku jirta goobta boogta iyo infekshanku waa la soo saaraa, siduu yahay baqshi.
Waa muhiim! Marka lagu daro infekshanka, enzyme waxaa lagu duraa nabarka, taas oo noqon karta xasaasiyadda ugu xoogan, gaar ahaan haddii qaniinyada ay ku badan yihiin.
Infakshiyada, oo ay qaadeen qoryaha, ayaa aad u daran. Kuwani waa cuduro sida:
Cudurada ugu caamsan ee qaba endoparasites:
Meelaha la isku qurxiyo;
Digniin! Wax khatar ah maaha liistada, kaas oo saameeya nidaamka bini-aadamka iyo qanjidhada.
Lama sheegi karo in cayayaanka kasta uu cudurku ku dhaco cuduradan, hase yeeshee halistu marwalba way sii jirtaa. Hase yeeshee, mid kasta oo ka mid ah qaniinyada ayaa keenaya wax xun, mararka qaarkood xanuun iyo cawaaqibyo badan.
Gaar ahaan khatarta ayaa ah boodada ratiga ah in bisad ay isku keeni karto. Jiirka waa mid aad u macquul ah cuntada, waxay ku dari karaan qashinka, hadhaaga xayawaanka jiran, iwm.
Bal qiyaas sida infekshanku u socdo! Waxay noqon kartaa pseudotuberculosis, tularemia, myxomatosis, melioidosis iyo cudurrada kale ee aan khatarta lahayn.
Cawaaqibta qaniinyada qaniinyada
Qaniinyada yaryar, gaar ahaan kuwa badan, waxay sababi karaan dareen-celin maqaarka daran, sida maqaarka oo casaan, barar dhaamo qaniinyo, cuncun daran. Xaaladaha qaarkood, horumarinta dermatitis boodhka, oo la daaweeyo aad u adag.
Qaniinyada ayaa sidoo kale keeni kara falcelin rabshado badan oo jirka ka mid ah qaabka bararka qanjirada nudaha, fal-celin xasaasiyadeed oo leh heerkulka sii kordhaya.
Iyada oo ay si joogto ah ula kulmaan boodo, oo leh xasilooni joogto ah inta ay sugayaan qaniinyada, dadka waxaa laga yaabaa inay la kulmaan cabsida, neuralgia, iyo xitaa xanuunada dareenka.
Nidaamka halganka waa mid fudud - nadiif ahow iyo qawaaniinta nadaafadda. Haddii cayayaanka cayayaanka ay yihiin xayawaanka aad jeceshahay, qaado tallaabo isla markiiba. Koofiyadaha iyo eeyda ayaa sidoo kale la kulma qaniinyada qaniinyada iyo sidoo kale khatarta ay ku dhici karto. Isla markiiba lacag la'aan ka sii daa ilaa inta ay gurigaaga degayaan.
Waxaad baran kartaa wax badan oo ku saabsan bisad iyo bisadaha, iyo sidoo kale tallaabooyin looga hortagayo, boggayaga internetka.
Nadiifinta guriga waa sidoo kale habka loola dagaalamo boodada. Si joogto ah u nadiifi roogaga, roogaga iyo gogosha xayawaanka, ha u oggolaan in boodhku ku ururo guriga.
Haddii aadan awoodin inaad la qabsato boodada adigaa iska leh, isticmaal wakiilada xakamaynta kiimikada ama la xiriir adeegyo gaar ah.
Gebogebo, waxaan kuugu soo bandhigaynaa fiidiyo ku saabsan sida looga takhaluso boodada guryaha: